मैले बुझेको र देखेको प्रेम | चितवन पोष्ट दैनिक
मैले बुझेको र देखेको प्रेम
नेपालमा केही वर्षदेखि भ्यालेन्टाइन डे धुमधामस“ग मनाउन थालिएको छ । प्रेमदिवस आउन थालेपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट यसका बारेमा केही लेखिदिन वा बोलिदिन भनेर ताकेता आउन थालेको पनि दुई–चार वर्ष नै हुन थाल्यो । देशप्रेमको डोरी चु“डिएको, मातृप्रेमको बन्धन तोडिएको, पितृप्रेमको सम्बन्ध टाढि“दै गएको, भातृप्रेमको सौहार्दता सुक्तै गएको र वैचारिक प्रेमसमेत दुब्लाउ“दै गएको परिस्थितिमा प्रत्येक वर्ष प्रेमदिवस आइरहन्छ र प्रेम दिनानुदिन दूबोसरी मौलाउ“दै गएको अनुभूति गर्नेहरुको जमात पनि बाक्लि“दै गएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा मैले आपूmले बुझेको विपरीत लिङ्गीप्रतिको आकर्षणको प्रेम र आपूmले अनुभव गरेको प्रेमका बारेमा सङ्क्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानेको छु ।
मेरो बाल्यकाल एवम् युवावस्था सधैँ अभावैअभावमा बित्यो । त्यसैले, मेरो जीवनले विपरीत लिङ््गीप्रतिको शारीरिक आकर्षणबाट निस्कने किसिमको प्रेम गर्ने अवसर नै पाएन । म करिब आठ वर्षको छ“दा देवघाटमा दुई कक्षामा पढ्थे“ । त्यतिबेला हामी केटाकेटीहरु मिलेर कपर्दी खेल्ने गर्दथ्र्यौं । हामीभन्दा चार–पा“च वर्षले जेठाजस्ता मानिने एक जना दाइ पनि हामीस“गै कपर्दी खेल्थे । त्यसबेला कपर्दी खेल्दा विपक्षीले सास नफेरीकन कपर्दी भनुन्जेल जित्न सक्छ कि भन्ने सम्भावना देखेर हामीले सकेसम्म उसलाई पछाथ्र्यौं र कपर्दी भन्न छाडेपछि छाडिदिन्थ्यौँ । तर, हामीस“गै कपर्दी खेल्न आउने हामीभन्दा जेठा ती साथीले केटी साथीले कपर्दी भन्न छाडिसके पनि उठ्न दि“दैनथे । म नबुभ्mने बालकजस्तो भए पनि त्यसरी कपर्दी भन्न छाडेर हारिसकेकी केटी साथीलाई उठ्न नदिनु राम्रो होइन भन्ने मलाई लाग्ने गर्दथ्यो ।
बागलुङमा चार–पा“च कक्षा पढ्दा म १०÷११ वर्षको थिए“ । त्यतिबेला गाउ“मा फलाना देवर भाउजू सल्केछन् भन्ने गाईंगुईं सुनिन्थ्यो । उनीहरुको अनैतिक सम्बन्ध गाउ“लेले थाहा पाएपछि भाउजू कालीगण्डकीमा हाम फालेका कारण लाससमेत नभेटिएको, देवर पनि गाउ“बाट भागेर अन्तै गएको र त्यस्ता देवरलाई ‘बापति’ भनेको पनि सुनेको थिए“ । हाम्रै स्कुलमा ९ कक्षामा पढ्दै गरेकी एउटी दिदी साथीले पनि आप्mनै दाजुभाइ पर्नेको पेट बोकेको भन्ने चर्चाले समेत गाउ“लाई सचेत गराएको थियो । त्यसैले, तत्कालीन सामाजिक बन्धनका कारण
हामीलाई एक त प्रेम गर्न नै गाह्रो थियो भने प्रेम गरिहालियो भने पनि समाजमा स्थापित भएर बस्न निकै कठिनाइ थियो ।
बाह्र वर्षको उमेरमा म संस्कृत पढ्न ललितपुरस्थित शान्तभवनमा पुगे“ । त्यहा“ व्रतबन्ध भएका ब्राह्मण वटुकहरुलाई मात्र पढ्ने व्यवस्था गरिएकाले दुई वर्ष दुई महिनासम्म हामी ब्रह्मचर्य पालनको निकै कडा अनुशासनमा बस्यौँ । त्यसैले, त्यस अवधिमा मैले न कतै प्रेम भन्ने शब्द नै सुने“, न त प्रेम गर्ने अवसर नै मलाई प्राप्त भयो । त्यहा“बाट संस्कृत पढ्न गोरखपुर पुगेपछि गोरखपुरको दुईवर्षे बसाइमा पनि मलाई प्रेमको परिभाषा बुभ्mने अवसर नै प्राप्त भएन । त्यसपछिको दुईवर्षे धरान बसाइमा समेत मैले प्रेम के हो ? भन्नेबारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिनँ । यद्यपि, धरानको विजयपुरस्थित पिण्डेश्वर क्याम्पसको छात्रावासमा बस्ता धरान ब्रिटिस क्याम्पतिरका ठिटाठिटीहरु जोडी भएर त्यता घुम्न जाने गरेको र घण्टौँसम्म एकै ठाउ“मा बसी कुराकानी गर्ने गरेको त देखेको थिए“, तर त्यस्तो क्रियाकलापलाई प्रेम गरेको भन्छन् भन्ने मलाई थाहा थिएन । त्यतिबेला हाम्रै कक्षामा संस्कृत व्याकरण मूल विषय लिएर पढ्ने एक जना मात्र छात्रा थिइन् । पढ्ने बेलामा साथीहरुले उनलाई कहिलेकाही“ जिस्क्याउने पनि गर्दथे । त्यसैले, उनी कक्षामा कम उपस्थित हुन्थिन् तर म भने ‘अहेरिव गणाद्भीतो मिष्ठान्नाच्च विषादिव, राक्षसीभ्य इव स्त्रीभ्यः स विद्यामधिगच्छति ।। अर्थात् सर्पजस्तै भीडबाट डराउने, विषजस्तै मीठो खानेकुराबाट डराउने र राक्षस्नीजस्तै ठानेर स्त्रीहरुबाट डराउने वा तिनीहरुको सङ्गत नै नगर्नेले विद्या प्राप्त गर्न सक्तछ भन्ने नीति श्लोक सुनेर त्यसलाई गुरूजस्तै ठानेको हु“दा त्यतिबेला हाम्री कक्षाकी ती छात्रास“ग मात्र होइन, कुनै पनि अविवाहित कन्यास“ग बोलचाल गर्न पनि म डराउ“थे“ । धरानमै मस“ग टाइपिङ सिक्न जाने एक जना साथी थिए । तिनले टाइप सिक्न आउने एउटी केटी साथीलाई प्रेम गर्दा रहेछन् भन्ने कुरो पछि सुनाए, तर तिनले त्यतिबेला कसरी प्रेम गर्थे ? भन्ने कुरा पनि उनीस“ग ६ महिना स“गै टाइपिङ इन्स्टिच्युट धाउ“दासमेत मलाई थाहा भएन । यसरी १९ वर्षको हु“दासम्म पनि म विपरीत लिङ्गीप्रति गरिने प्रेमको परिचयबाट वञ्चित रह“दै आएको थिए“ ।
बीस वर्षको उमेर छ“दा मैले दाङमा शास्त्री अर्थात् स्नातक प्रथम वर्षमा पढ्थे“ । त्यतिबेला मेरो कक्षामा संस्कृत पढ्ने केटी साथीहरु पनि प्रशस्तै हुन्थे, तर मैले उनीहरुलाई साथी बनाउनेसम्म प्रयत्न गरिनँ । बीस वर्षको उमेरमै म संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थायी खरिदार पदमा नियुक्त भएर गुल्मीको रिडीमा रहेको रूरू संस्कृत क्याम्पसमा पुगे“ । त्यस क्याम्पसमा छात्रभन्दा छात्राहरुको सङ्ख्या बढ्ता थियो । हामी तीन जना नया“ कर्मचारी डेरा गरी बस्ने घरकी एक जना बहिनी पनि त्यही क्याम्पसमा पढ्थिन् । उनको शारीरिक संरचना हेर्दा मैले उनलाई दिदी भन्न सुहाउ“थ्यो । त्यसैले, मैले उनलाई बहिनी भने पनि दिदीको जस्तै सम्मानित व्यवहार गर्दै आएको थिए“ । म रिडीबाट सरूवा भई दाङ गएपछि मेरो रिडीबाट बिदाइ हु“दाका फोटाहरुस“गै उनको एउटा सानो चिठी पनि मैले फेला पारे“ । उनले चिठीमा मलाई आदरणीय सर भनेर सम्बोधन गरेकी थिइन् र आप्mना वृद्ध हजुरबुबा र हजुरआमालाई प्रतीक बनाएर ‘डुब्न लागेका घामलाई एकपटक भेट्न आउनु होला’ भनेर अनुरोध गरेकी थिइन् । मैले त्यस पत्रको प्रत्युत्तर दिने आवश्यकता नै देखिन“ र अहिले मैले त्यसलाई एकोहोरो अमूर्त प्रेमको पत्र ठानेर अथ्र्याउन खोज्दा अनुपयुक्त होला भन्ने मलाई लाग्दैन । रिडीमा छ“दा म कर्मचारी भए पनि विद्यार्थीस“ग मैले साथीको जस्तै व्यवहार गर्थें भने मलाई उनीहरुले सम्मान गरेर ‘गुरू’ भन्न रूचाउ“थे । ‘मति गुरू साह्रै सोझो हुनुहुन्छ, प्रेम गर्न जान्नुहुन्न हामीले जस्तो’ भन्ने विद्यार्थीहरु पनि त्यही“ भेटिन्थे र उनीहरुले आप्mना केटी साथीहरुस“ग प्रेम गरिरहेको कुरा पनि गर्थे । तर, मलाई मेरा विद्यार्थीले जस्तै शारीरिक प्रेम गर्ने रहर कहिल्यै पलाएन ।
दाङमा दुई वर्षजति कर्मचारी भएर बस्ता पनि मेरो ध्यान पढाइ र कार्यालयीय व्यस्ततामै गयो । २४ वर्षको उमेरमा म क्याम्पसको प्राध्यापक भएर तनहु“ क्याम्पस पुगे“ । मस“गै गणित विषय पढाउने अर्का साथी पनि अविवाहित नै थिए । उनले क्याम्पस पढाउन थालेको केही महिनामै आप्mनो गृहजिल्ला झापातिरै बिहे गरे । म अर्को विषय (नेपाली) बाट पनि एमए पूरा नगरून्जेल बिहे नगर्ने विचारमा प्रतिबद्ध थिए“ । क्याम्पस चलेको त्यस गाउ“मा अविवाहित रुपमा दुई वर्षसम्म बस्ता क–कसले मलाई जीवनसाथी बनाउन रूचाएर एकोहोरो प्रेम गरे ? त्यो मलाई थाहा छैन । मैले भने पोखराको क्याम्पसबाट आईए सकेर मैले पढाउने क्याम्पसमा संस्कृत पढ्न सुरू गरेकी एक जना चेलीलाई भावी जीवनको कल्पना गर्दै उनको आनीबानीसमेत पढिरहेको थिए“, तर उनकै दिदी अविवाहित थिइन् । उनकी दिदीको बिहे नहु“दै मेरो अर्कै कन्यास“ग बिहे भयो । त्यसैले, मैले भित्रभित्रै रूचाउन खोजेको तर एकपटक पनि प्रेम प्रस्ताव राख्न नसकेको त्यो एकोहोरो प्रेमको पर्दा पनि त्यही“ बन्द भयो । यसरी २७ वर्षसम्मको उमेर हु“दा पनि मैले शारीरिक प्रेम गर्न नपाएको त्यो क्षण सम्भ“mदा मलाई यतिबेला कुनै पछुताउ छैन । किनकि, त्यस्तो शारीरिक प्रेमको पछि लागेको भए मेरो पुस्तकप्रेम थलामा पर्ने
थियो । मेरो पुस्तकप्रेम नै थलामा परेको भए आज मैले यत्तिकै कामचलाउ बौद्धिक क्रियाकलाप पनि गर्न सक्ने थिइनँ ।
वर्तमान पुस्तालाई भ्यालेन्टाइन डेले प्रत्येक वर्ष आमन्त्रण गरिरहेको हुन्छ र यस वर्ष पनि गरिरहेको छ । भ्यालेन्टाइन डे त एउटा चाडजस्तै वर्षमा एक दिन आउ“छ र जान्छ, तर आजको नवपुस्ता सधैँजसो भ्यालेन्टाइन डे मनाइरहन आतुर भएजस्तो देखिन्छ । यसरी सधैँभरि मनाइरहने प्रेमदिवसले प्रेमलाई शारीरिक प्रेममा मात्र खुम्च्याउ“दै गएको अनुभूति मलाई बारम्बार हुने गरेको छ, जसका कारण भ्यालेन्टाइन डे आउ“दा पनि मेरो मन कहिल्यै रमाउन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा ‘राष्ट्रलाई प्रेम गर्न नसक्नेले अरुलाई प्रेम गर्न सक्तैन’ भन्ने प्रसिद्ध विचारक बाइरनको भनाइ सुन्दा प्रेमलाई राष्ट्रप्रति पनि समर्पित गर्नुपर्ने थियो भन्ने मलाई लाग्दछ । प्रेमकै प्रसङ्गमा मलाई पारिजातको एउटा भनाइले सधैँ संवेदनशील बनाउने गर्दछ ः ‘शारीरिक आकर्षणबाट निस्कने प्रेम प्रेम होइन, त्यो दुई दिन रहन्छ, अनि मर्छ ।’ निश्चय नै आजको प्रेम शारीरिक आकर्षणबाट निस्कने प्रेमभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन, आत्मिक प्रेम बन्न सकेको छैन । जबसम्म प्रेम शरीरभन्दा माथि उठेर आत्मिक वा अन्तर्हृदयसम्म पुग्छ, आत्मिक बन्न सक्छ तबमात्र त्यस्तो प्रेम अजर र अमर बन्न सम्भव हुन्छ । प्रत्येक वर्ष प्रेमदिवस मनाउन आतुर भइरहने जोडीहरुले के यस्तो प्रेमतिर पनि आ“खा पु¥याउने फुर्सद पाउलान् ?